नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग फाइदा लिनुपर्छ : डा. महत «
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता महतले भने, ‘भारतसँग नेपालको त्रेतायुग र द्वापरयुगदेखिको सम्बन्ध हो । चीनसँग पनि सातौं शताब्दीदेखि सम्बन्ध हो । नेपालको लोकेसन नै रणनीतिक छ । यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।’
नेता महतले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अत्यन्तै पूरानो र घनिष्ठ रहेको सुनाए । उनले भने, ‘भारतसँग सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध बढी छ । आर्थिक सम्बन्ध पनि छ । नेपालको कुल व्यापारको ६९ प्रतिशत आयात भारतबाट हुन्छ । चीनबाट १५ प्रतिशत हुन्छ । ५८ प्रतिशत निर्यात पनि हाम्रो भारतसँग छ । व्यापारको हिसाबले पनि भारत र चीनसँग अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध छ ।’
उनले आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिए । महतले नेपालले भौगोलिक अखण्डता र आफ्नो सार्वभौमिकता मेन्टेन गर्दै सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए । उनले भारतसँग धेरै विवाद रहेको सुनाउँदै ती नयाँ विषय नभएको पनि सुनाए ।
त्यस्तै, चीनसँग पनि नेपालको सिमा विवाद रहेको उनले उल्लेख गरे । महतले भने, ‘हुम्लामा कतिपय पहिलेका खम्बाहरु, पिल्लर सारिएका छन् भन्ने कुरा आएका छन् । यसबारेमा निष्पक्ष ढंगले विज्ञहरु बसेर हेर्नुपर्छ । छानबिन गरेर टुंगो लागोस् । भारतसँगको सिमाना पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । अहिले भएका सानातिना समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।’
फरक प्रसंगमा उनले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको तयारी भैरहेको सुनाए । उनका अनुसार क्रियाशिल सदस्यता जिल्लाजिल्लाबाट यो महिनाभित्र आइपुग्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ । महाधिवेशन निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुले आवाज उठाएको पनि महतले सुनाए ।